Ahoana ny fomba hahatonga azy ho mpitsabo mivantana amin'ny aterineto?
Ny tontolo maoderina amin'izao fotoana izao dia nanjary nomerika kokoa noho ny hatramin'izay, satria ny tombantombana iombonana dia milaza amintsika fa mihoatra ny antsasaky ny mponina manerantany no mijoro ho mpampiasa, ka saika isan'andro isaky ny Internet. Ankehitriny, maherin'ny 3 lavitrisa mpampiasa aterineto no mitondra ny indostrian'ny dikan-tsarimihetsika dizitaly mba hisy fiantraikany bebe kokoa amin'ny fiainantsika. Vokatr'izany, ny sehatra nomerika toy ny sehatry ny varotra amin'ny aterineto, ny mpitantana varotra, ny fikarohana amin'ny Internet, CRM, na ny manam-pahaizana momba ny fampiroboroboana ny vokatra dia mitaky mafy ny fitomboan'ny orinasa mifandraika amin'ny indostria - lemo 2 stock coil.
Alohan'ny hanombohantsika, andao hiverina indray. Rehefa milaza izahay fa manampahaizana manokana amin'ny varotra an-tserasera, dia matetika izahay no manondro ny marika na ny fampiroboroboana vokatra amin'ny media dizitaly. Ity sehatra medikaly teo aloha ity dia mifototra amin'ny fanentanana fanentanana an-tserasera amin'ny alàlan'ny fantsona nomerika mifototra amin'ny votoatin'ny fitaovana maimaim-poana amin'ny tranonkala sy ny media sosialy. Mpanazatra ara-barotra amin'ny aterineto amin'ny aterineto dia mifantoka amin'ny fananganana orinasa marika matanjaka kokoa, manatsara ny fahatsiarovan-tena an-tserasera amin'ny mpanjifa maro kokoa ho an'ny fiovam-pitaterana bebe kokoa mitondra azy ireo any amin'ny tena mpividy. Ny mpilalao lehibe eto dia efa zatra mampiasa vola amin'ny haino aman-jery isan-karazany toy ny fikarohana momba ny angona, ny dokambarotra sy ny sisa. Ary ny tanjona voalohan'ny ankamaroan'ny manam-pahaizana momba ny varotra an-tserasera dia ny hitondra fiara lehibe kokoa amin'ny mpanjifa amin'ny alalan'ny fitomboana ara-boajanahary na karama.
Noho izany, nahoana ny marketing ara-nomerika no lasa malaza eran-tany? Ary noho izany, nahoana ny mpikaroka momba ny varotra an-tserasera no nangatahana an-tsitrapo izao? Voalohany, ny marketing ara-nomerika maoderina dia afaka manome tanjona mazava tsara, matetika mahavita manome valiny haingana. Mora kokoa ny vidiny ary azo antoka kokoa ny fahombiazany amin'ny voalohany. Na ireo tombony voalaza etsy ambony aza dia tena resy lahatra fa tokony hiaiky aho. Noho izany, inona ireo fahaiza-manao tena mahomby tokony hohazavaina amin'ny mpikaroka ara-barotra rehetra amin'ny aterineto manosika ny lalana mankany amin'ny fahombiazan'ny profesora?
Andramo ny hamolavola ny fahaiza-manao ilaina mba hahatongavana ho mpirotsaka hofidiana ho any an-kianja. Ny zava-misy dia ny tsy fahampian'ny herisetra maro samihafa atolotra amin'ny aterineto. Noho izany, sarotra ny manao ny fahasamihafana marina ary manome torohevitra marina. Na izany aza, ny azoko ambara dia azo antoka fa ny manam-pahaizana momba ny varotra amin'ny aterineto rehetra dia tsy maintsy manana fahalalana lalina ao amin'ny web analytics, mahatsapa ny momba ny teny fototra momba ny dikan-tserasera nomerika, hahatakatra ny fototry ny fianarana tany am-boalohany, ny sehatra iraisam-pirenena sy ny seha-pifaneraserana ara-barotra maoderina.
Fa ahoana no fomba hahitana ny lalana mety ho lasa manam-pahaizana momba ny varotra an-tserasera? Mino aho fa tokony ho feno tanteraka sy ho tanteraka ny fianarana toy izany, ary azavao tsara fa ireto manaraka ireto no ahafahana manao safidy tsara:
hevitra fototra (Search Engine and Conversion Rate Optimization, Media Social ary Content Marketing, Web Analytics, Email sy Mobile Strategy, Paid Search Marketing, sns. )
fitaovana fototra sy rafitra (Mando anao amin'ny dokambarotra Click, AdWords, Google Analytics, YouTube, Facebook, Twitter, sns.)